Antsipirian'ny vokatra Ny fitsipiky ny fiasan'ny jack jack dia ny mpamily mitondra ny piston kely mankany ambony. Ny menaka ao anaty fitoeran-diloilo dia atsofoka ao amin'ny tapany ambany amin'ny piston kely amin'ny alàlan'ny fantson-diloilo sy valizy tokana. Rehefa tsindriana midina ny valizy, dia voasakana amin'ny valizy tokana ny piston kely. Ny menaka ao amin'ny faritra ambany amin'ny piston kely dia apetaka amin'ny tapany ambany amin'ny piston lehibe amin'ny alàlan'ny faribolan'ny solika anatiny sy ny valizy tokana, ary ny faritra ambany amin'ny pisto kely ...
Product Detail station garazy 1. Rafitra fanaraha-maso hydraulic mahazatra, fitsitsiana angovo ary fiarovana tontolo iainana ny tontolo iainana. 2. Ny famolavolana dingana henjana dia miantoka ny fampiasana angovo avo. 3. tabataba ambany, tsy misy fivoahana. 4. Ny singa lehibe indrindra dia ny marika malaza iraisam-pirenena, rafitra azo antoka sy milamina. 5. firafitra matevina, hery mahery, fahita matetika miasa. 6. Ny singa rehetra dia miantoka ny fifandimbiasana sy ny tahan'ny fanombohana avo. Tazomy Izy io dia fepetra lehibe hifehezana ny loto maloto ...
Product Detail Angovo herinaratra Hydraulika dia tobim-pifandraisana mikraoba mifangaro. Izy io dia misy motera, paompy solika, sakana valizy tafiditra, sakana tsy miankina tsy miankina, valizy hydraulic ary kojakoja maro samihafa (toy ny mpanangona). Raha ampitahaina amin'ny tobin-tsolika mahazatra miaraka amin'io fitsipika io ihany dia manana ny tombony amin'ny firafitra mifangaro, habe kely, lanja maivana, fahombiazana avo lenta, fampisehoana azo itokisana, fisehoana tsara tarehy, tsy misy famoahana sy vidiny ambany. Amin'izao fotoana izao, ity vokatra ity dia manana ...
Product Detail 1.Weirun dia manana rafitra fitantanana feno sy siantifika ho an'ny faritra sy ny singa fiara. Shandong weirun Auto Parts Co., Ltd. dia eken'ny indostria amin'ny fahamendrehany, ny tanjany ary ny kalitaon'ny vokatra. Tongasoa eto an-tany ny namana avy amin'ny sokajin-javatra rehetra mba hitsidika, hitarika sy hifampiraharaha amin'ny orinasa. Ny orinasanay dia orinasa famokarana akora matihanina matihanina. Ny vokatra lehibe indrindra dia ny karazana valin'ny valizy. Izy io dia mety amin'ny karazana minitype rehetra, maivana ary mavesatra ...
Product Detail 1.Structure of scissor jack Izy io dia misy fotony, sandry ambany manohana ambany, sandry manohana ambony, soavaly, fitondra fiaramanidina, voanjo, cradle, vatan-kazo ary tsorakazo. Ny sisin'ny sandry ambony manohana ambony dia avadika ho lasa henjana, ary ny tendrony dia noforonina ho lasa vy sy voadidy; ny sisin'ny sandry roa manohana ambany dia avadika ho taolan-tehezana manamafy, ary ny tendrony dia noforonina ho kodiarana sy miforitra. 2.Prinsipan'ny jack scissor Ny ...